बन्दाबन्दैको मोटरेबल पुल खोलामा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
असार २७, २०७६ आश गुरुङ
लमजुङ — हिमाली जिल्ला मनाङमा मर्स्याङदी नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल बुधबार खसेको छ । मनाङ–ङिस्याङ गाउँपालिकाको हुम्डे र ङावल जोड्न चारवटा मात्र ‘मेम्बर’ जडान बाँकी रहेको ‘स्टिल गर्डर ब्रिज’ खसेको हो । मेम्बर जडानलगत्तै ढलान गर्ने निर्माण कम्पनीको तयारी थियो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत टीकाबहादुर गोदारका अनुसार एक महिनाअघि नै पुल बांगिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेलगायतले स्टिलहरू झिकेर राख्न निर्माण कम्पनीलाई भने पनि अटेरी गरेकाले बर्खायाममा पुल खसेको उनले बताए । पुल नदीमाथि एल आकारमा बसेको छ । स्टिल बांगिएका छन् । गोदारका अनुसार मर्स्याङदीमा बहाव बढेको र हिउँदमा लगाएको टेको पानीले खोतलेपछि धान्न नसकेर पुल झरेको हो । ‘एक महिनादेखि मान्छे थिएनन् । हामीले पुल बांगिन थालेपछि भनेका थियौं । अहिले पुल खस्यो । एक साताअघि कामदार आएका थिए । झिक्ने सामान आएन भनेर काम गरिएको थिएन,’ उनले भने ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत प्राविधिक कार्यालयले हेर्ने गरी ग्याल्वा–क्याराभान कन्स्ट्रक्सन जेभीले निर्माण थालेको थियो । प्राविधिक कार्यालय हटेर पूर्वाधार कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि जिल्ला समन्वय समिति मनाङले पठाएको पुलको फाइल लमजुङस्थित पूर्वाधार कार्यालयले २०७५ चैत १९ गते प्राप्त गरेको छ । कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राम पराजुलीका अनुसार सन् २०१६ जुलाई १४ (२०७३ असार ३० गते) सम्झौता गरिएको पुल २०७५ मंसिर १५ गतेसम्म सक्नुपर्ने थियो । समयमै निर्माण सकिएको भए अहिले यो समस्या नआउने उनले बताए ।
ग्याल्वा–क्याराभान जेभी काठमाडौंले भ्याटबाहेक ४ करोड ५१ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँमा उक्त पुल बनाउन लागेको हो । ३५ मिटर लम्बाइ र साढे ४ मिटर चौडाइको पुल खस्दा ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म क्षति भएको पराजुलीले बताए । उनका अनुसार पुल जोडदा र खोल्दा भारतीय कामदारको आवश्यकता पर्छ । यस्तो पुलमा स्टिल जोड्ने नेपाली कामदार प्रायः भेटिँदैनन् । पुलमा समस्या आएपछि २ महिनाअघि नै सचेत गराइएको उनले बताए । ‘पुलमा समस्या आएको जानकारीपछि कामदार १५ दिनअगावै गएका थिए,’ उनले भने, ‘कामदार जसोतसो पुगे । बाढीपहिरोले ठाउँठाउँमा क्षति पुर्‍याएपछि खोल्ने मेसिन पुर्‍याउन सकिएन । त्यसकारण पुल खस्यो ।’
क्याराभान कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर रामकृष्ण कोन्डाका अनुसार पुलका लागि राखिएको सपोर्ट पानीले बगाएको हो । ‘स्टिलको काम पूरा हुनै लागेको थियो,’ उनले भने, ‘पुल लच्किएको जानकारी आउनेबित्तिकै कामदारलाई जोड्ने सामग्रीसहित पठाएका थियौं । म्यार्दी खोलामा पुल बगाएका कारण सामान लैजान नसक्दा काम गर्न पाएनौं ।’
प्रदेशसभा भवन डुबानमा
विराटनगर– वर्षाले विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवन डुबानमा परेको छ । सामान्य वर्षामा पनि बैठक कक्षभित्रको शौचालयबाट पानी निस्कने गरेको संसद् सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकास्थित अस्पताललगायत क्षेत्र पनि डुबानमा परेका छन् । ढलको उचित निकास नगरी सडक अग्लो बनाइएका कारण कोसी अञ्चल अस्पताल परिसर जलमग्न छ । ढलको पानी औषधि पसल र प्रशासनिक भवनमा पसेपछि समस्या भएको छ ।
पानीको निकास नहुँदा अस्पतालमा उपचार गराउन आएका सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छोराको उपचार गराउन आएकी पवित्रा ऋषिदेवले बताइन् । दुई दिनदेखि जमेको पानी नसुकेपछि सुरक्षाकर्मीले पम्प लगाएर फ्याँक्नुपरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रोशन पोखरेलको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल ३ नम्बर गण कंकालिनी मोरङका सई केदार कटुवालको नेतृत्वको टोलीले अस्पताल परिसरमा जमेको पानी पम्पसेटबाट निकाल्न थालेको छ । प्रदेशसभा भवन र हस्पिटल चोकमा पानी जमेपछि विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, इन्जिनियर घनश्याम काफ्लेसहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ । अञ्चल अस्पताल र आसपासका क्षेत्रमा जमेको पानीको निकासका लागि देवकोटा चोकमा एस्काभेटर लगाएर कल्भर्टबाट पानी पास गराइएको छ ।
श्रीलंका टप्पुमा कोसी कटान
सुनसरी– सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका ६ मा पर्ने श्रीलंका टप्पुको चिलैया बस्तीमा कोसी नदीको भंगालाले कटान तीव्र पारेको छ । लगातार झरी परेपछि कोसीमा पानीको सतह पनि बढेको छ ।
चार दिनदेखि कटान हुन थालेको वडा सदस्य श्याम लिम्बूले जानकारी दिए । ‘कोसीले चिलैया बस्तीका करिब ५० घर जोखिममा परेका छन् । उद्धारका लागि कतैबाट पहल हुन सकेको छैन,’ उनले भने । यहाँको बालसेवा आधारभूत विद्यालय पनि कटानमा परेको छ । कोसीले चार दिनयता दैनिक सरदर पाँच मिटरका दरले कटान गरिरहेको उनले बताए ।
‘यसरी नै कटान हुँदै जाने हो भने दुई/तीन दिनमा चिलैया बस्ती नै बगाउन सक्छ,’ लिम्बूले भने, ‘पानीको सतह पनि बढिरहेकाले कहाँ जाने, के गर्ने भनेर आत्तिएका छौं ।’ सरकारी निकाय र प्रहरी प्रशासनको कमै उपस्थिति हुने उक्त श्रीलंका टप्पु उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको बीचमा पर्छ ।
प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:४०
प्रा.डा. गोविन्द केसीले भने - 'आयोग उपाध्यक्षमा योग्य व्यक्ति ल्याऊ’
काठमाडौँ — प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्य र कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले हाल अघि बढाइएको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । केसीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनका ‘माफियामुखी प्रावधानहरू’ हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
आयोग उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर खुवाउने वा कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी संवेदनशील रहेको औंल्याउँदै उनले आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु विकृतिलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु रहेको बताए ।
माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरेर सुधारका लागि लडिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोग उपाध्यक्ष छनोटमा आफूहरू मौन रहन नसक्ने चेतावनी दिए ।
‘आयोग बनेपछि पनि पार्टी स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धि पनि गुम्ने निश्चित छ,’ उनले भने ।
मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सूचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरू हटाउन पनि केसीले माग गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने केसीको माग छ ।
प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:३८